ခြစ်ရာ Card များကိုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေ Hippozino အပ်နှံ£ 20 & £ 50 က Play
အ Scratch Card များကိုအဘယ်သူမျှမအပ်နှံ၏အင်္ဂါရပ်များ
Hippozino မိုဘိုင်း / အွန်လိုင်းကာစီနိုမှာဘီးလည် & အခမဲ့အပိုဆု Get! သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာကစား!
အဆိုပါအတိအကျ slot ခရီးဆောင်လောင်းကစားဝိုင်းပူးတွဲ၎င်း၏စိတ်ကြိုက် dashboards နှင့်ညီညွတ်သော e-ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အတူလောင်းကစားအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံပြောင်းလဲသွားပြီ. ကစားသမားသရုပ်ပြ mode နဲ့ဒါ့အပြင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ mode မှာမွေ့လျော်သည်လက်လှမ်းဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကစားသမားကိုတောင်လောင်းကစားရုံ၏ပျော်စရာ / သရုပ်ပြမုဒ်ကစားအခမဲ့ခြစ်ကဒ်ကိုဂိမ်းတန်ဖိုးထားနိုင်. ထိုတွန်းအားတစ်ခုအင်္ဂါရပ်အဖြစ်, လူတိုင်းရရှိသွားတဲ့ ခြစ်ရာ Card များကိုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေ ပြောင်းလဲနေသော slot နှစ်ခုနှင့်အတူအခမဲ့အပိုက​​ြီးတွေလောင်းကြေးငွေကိုအနိုင်ရသဖြင့်သူတို့၏ပျြောရှငျမှုမြှင့်တင်ရန်. ဒါဟာအလွန်ကောင်းနှင့်အွန်လိုင်းဆွဲဆောင်ခရီးဆောင်လောင်းကစားရုံဖြစ်ပါသည်.
ကျောင်းအပ်အပြီးတွင်, အတိအကျ slot မှာကစားသမားကျော်ကြည့်ဖို့မရ 200+ သူတို့ရဲ့အခမဲ့£5အွန်လိုင်း Scratch Card များကိုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေသုံးစွဲဖို့ slot နှစ်ခုနှင့်ဂိမ်းများ. နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့ဒါ့အပြင်ကနဦးသုံးသိုက်အပေါ်တစ်ဦးပြန်လည်ပိုက်ဆံအမျိုးအစား slot နှစ်ခုဆုလာဘ်အဖြစ်ပတ်ပတ်လည်£ 200 ရဖို့တိကျတဲ့အဆုံးရည်မှန်းချက်နှင့်အတူသိုက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အပေါ်. ကစားသမားတွေကစားပင်နိုင်ပါတယ် ခြစ်ရာ Card များကိုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေ သူတို့တစ်တွေကို web ဆက်သွယ်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသို့မဟုတ်အာမခံဖို့မအလိုရှိသည့်အခါ.
Hippozino ကာစီနိုနဲ့အတူ Register & £ 20 ငွေသွင်းခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Play မှ£ 50 ဦးကိုရယူပါ & နှလုံး Thumping ကာစီနိုဂိမ်း & slots!
အအတိအကျ slot လောင်းကစားရုံများ၏ site ကိုမခွဲခြားဘဲ menus တွေနှင့်အမျိုးအစားကိုဖွိုဖကျြရှိခြင်း၏အလွန်အားသွားလာလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်. ဒီအသီးအသီးကစားသမားများအတွက်စိတ်ကြိုက် dashboards အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်းခဲ့. အဆိုပါအွန်လိုင်းခြစ်ကဒ်ဆုချီးမြှင့်ထုတ်ဖေါ်ဖို့ခြစ်ထားတဲ့ကဒ်ဖြစ်ပါသည်. အောက်တွင်ကျနော်တို့ Scratch Card များကိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမအပ်နှံသော website ကိုကမ်းလှမ်းမှုများဆွေးနွေးရန်.
အ Scratch Card များကိုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအားကောင်းမောင်းသန်၏မဟာဗျူဟာ
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအိတ်ဆောင်ကိရိယာပေါ်တွင်အတိအကျ slot လောင်းကစားရုံ website မှာဝငျရောကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအခြေခံအားဖြင့် site ပေါ်တွင်သွားဖွငျ့ဤလုပျနိုငျ. မည်သည့်ကိစ္စတွင်၌သင်တို့ကိုသစ်တစ်ခုဖောက်သည်လျှင်, ထို့နောက်သင်အတိအကျ slot အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ site ပေါ်တွင်စံချိန်တင်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
သငျသညျဂိမ်းအသစ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအခြေခံခေါင်းစဉ်ဖတ်နှင့်သင်တို့မဟုတ်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်နိုင်, သငျသညျမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အ Scratch Card များကိုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေဆိုမှငါ့ဟာစတင်ပြီးသိုက်အောင်ကိုစတင်နိုင်ပါတယ်.
တစ်ဦးကြောင့်ပါဘဲ, သင် Scratch Card များကိုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေဝန်ခံ, ထိုစီမံခန့်ခွဲရန်နေရာအခမဲ့ချစ်ပ်ကိုဝယ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်.
အတိအကျ slot အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံမှာလိုအပျတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေတစ်နညျးတူတူတစ်ခုခုရဖို့ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်, ဤ Scratch Card များကို 10 ဖျော်ဖြေရေးအပေါ်အခမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို.
ထိုရည်မှန်းချက်နှင့်အတူလိုအပ်တဲ့အခါဒါတွေဟာ Scratch Card များကိုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေသင်တစ်ဦးအကျိုးရှိသောနိဂုံးချုပ်ရနိုင်ကြောင်းသုံးသင့်ပါတယ်. ဤပြီးနောက်ဆောင်ခဲ့ကြ၏ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေန၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်. အဆိုပါ site ကိုရိုးရိုး account တစ်ခုလုပ်တစ်ခုနှင့်ကနဦးသိုက်လုပ်သူကိုလူအဖို့လိုအပ်မရှိသိုက်ဒီခရီးဆောင်လောင်းကစားဝိုင်းပူးတွဲကမ်းလှမ်း. အခြားအခြေခံကျသောသငျသညျကျည်တစ်အချို့သောအတိုင်းအတာကစားရန်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်, ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုအကျိုးနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုအောကျမေ့.
အဆိုပါဆုချောချောမွေ့မွေ့ဆုတ်ခွာစေခြင်းငှါနှင့်မကြာမီမည်သည့်ဒုက္ခမရှိဘဲသင်၏စံချိန်မှအသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်. သင်၏အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးအချိန်ရှိသည်ဖို့လောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားခြင်းထဲကကန် Get.